अध्यन भन्छ : मदिरा कहिलेकाहीँ पिउनु भन्दा नियमित पिउनु लाभदायक – Khabar Silo
अध्यन भन्छ : मदिरा कहिलेकाहीँ पिउनु भन्दा नियमित पिउनु लाभदायक
Posted on October 18, 2019 Author admin Comment(0)
काठमाडौं । के तपाई नियमित मादक पदार्थ सेवन गर्नुहुन्छ ? कि कहिले कहिले मात्रै गर्नुहुन्छ ? यदि तपाईको उत्तर कहिलेकाहीँ पिउँछु र पिएको बेलामा धेरै पिउँछु भन्ने आयो भने त्यो गलत हुनेछ ।
तर तपाँईको उत्तर नियमित पिउँछु भन्ने आयो भने तुलनात्मक रूपमा तपाँईको बानी ठीक छ भन्ने एक सर्वेक्षणले देखाएको छ । सर्वेक्षणकर्ताहरूको उक्त प्रतिवेदन युरोपेली हृदयरोग चिकित्सक समाजद्वारा प्रकाशित ‘इपी युरोपेस’ मार्फत् सार्वजनिक भएको हो ।
अध्ययनका लेखक तथा कोरियाली विश्वविद्यालयका डा जोङ द्वितीय चोइले मादक पदार्थको सेवनको मात्रा र नियमिततालाई केन्द्रित गरेर अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
मादक पदार्थ थोरै थोरै नियमित सेवन गर्नेभन्दा कहिले कहिले धेरै सेवन गर्नेलाई बढी असर गर्ने गरेको पाइएको अध्ययनबाट थाहा भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँले अनियमित सेवनबाट मुटुमा धेरै असर गरेर मुटुसम्वन्धी समस्याहरू बढी सृजना गर्ने गरेको पनि बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अनियमितताले मुटुको धडकन बढ्ने, नाडीको रफ्तारलाई बढाउने वा अनियमित बनाउने, स्याँ स्याँ हुने, धेरै थकाई लाग्ने, छाती दुख्ने र चक्कर लाग्नेजस्ता समस्या उनीहरूमा देखिने गरेको छ ।
मानिसलाई गर्ने क्षतिमा मादक पदार्थको कुल मात्रा वा मादक पदार्थ सेवनको कुल सङ्ख्यामध्ये कुन कुराले मुख्य भूमिका खेल्छ भन्ने दावीसाथ भन्न भने अझै नसकिने विश्लेषण पनि छ ।
अध्ययनकर्ताहरुले यो सर्वेक्षणमा ९७ लाख ७६ हजार ९ सय ५६ जनालाई सहभागी गराइएको जानकारी दिएका छन् । सन् २००९ देखि सुरु भएको अध्ययन सन् २०१७ सम्म चलेको थियो । एएनआई
एक हप्ता लगातार सुत्नुअघि अनुहारमा काँचो आलु दल्नुहोस्, आफै देख्नुहुनेछ चमत्कार
Posted on September 5, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ । हामी अनुहारलाई लिएर निकै चिन्तित हुने गर्दछौ । सुन्दर गोरो र चम्किलो अनुहार बनाउन सधै प्रयासरत पनि हुन्छौ। क्रिम पाउडर आदि लगाएर पनि अनुहार टल्काउने गर्दछौ। तर घरेलु उपाय भने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। अनुहार चम्काउन र सफा बनाउन सक्ने घरेलु उपाय धेरै छनः यदि चर्को घाममा तपाईंको छालाको रङ फिक्का या कालो […]
दिनको ३ वटा छोकडा खानुहोस्, १ हप्तामै मिल्नेछन् नपत्याउँदा फाइदा
Posted on September 27, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ । छोकडा अर्थात् ड्राइफुडको एउटा किसिम । अंग्रेजीमा date भनिने यो फलको अर्को नाम खजुर पनि हो । चाहे छोकडा भन्नुस् या खजुर, यो फल मानव स्वास्थ्यको लागि अत्यन्तै लाभकारी छ। कतिसम्म भने, तपाईंले दिनको ३ वटा छोकडा एक हप्तासम्म लगातार खानुभयो भने, त्यसले नपत्याउँदो फाइदा दिने गर्छ । त्यो फाइदाबारे जानेपछि पक्कै पनि […]
गाउँमै पाइने दूधे झारका यति धेरै चमत्कारी फाइदा यस्ता ५ रोगको औषधि, सामान्य जरो देखि यति ठूलो रोग पनि हुन्छ निको
Posted on September 11, 2021 Author khabar silo
काठमाडौँ । गाउँमै पाइने दूधे झार का यति धेरै चमत्कारी फाइदा सामान्य जरो देखि ठूलो रोग पनि हुन्छ निको । अहिले मानिसहरु चिकित्स उपचार पद्धतिमा मात्र भर नपरी आयुर्वेदिक पद्धतिइ पनि अगालिरहेका छन् । किन भने चिकित्सा पद्धतिका धरै साइड इफेट रहेको हुन्छ त्यसैले बजारमा अहिले थुपै जडिबुटी औषधि पाइने गर्दछन। आज हामी तपाइलाई हाम्रो […]
बिहानै खालीपेटमा यस्तो बनाएर ३ गिलास पानी पिउनुहोस् : केही दिनमा सुरु हुन्छ यस्तो चमत्कार
कार्तिक र साराको ब्रेकअप ?
युएईको एक कम्पनीमा ५०० जना नेपाली कामदारको माग, कस्तो छ तलब हेर्नुस् !
साम्राज्ञीले अभिनय गरेको गीतमा टिकटक बनाउनेलाई २५ हजार देखि १ लाख सम्म पुरस्कार (भिडियो हेर्नुस्)
गौतमबुद्ध विमानस्थलमा राख्न बनाइएको साढे २ अर्ब ५० करोडको बुद्धको मूर्ति भैरहवा आइपुग्यो
यी महिलाले मानिसहरुलाई धनी बन्ने सपना देखाएर ६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ लुटिन्